Osisi Ogwu | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Osisi Ogwu
Otu esi akụ mkpụrụ osisi oregano, karịsịa ịkụ osisi
Na mgbakwunye na poteto, eyịm na tomato, akwa na mba ọ bara uru ịkụ mkpụrụ osisi na herbs dị ka oregano (oregano). Na mgbakwunye na tii na-atọ ụtọ na efere osere, ọ ga-enye aka ichebe ogige ahụ site na pests ma bụrụ nke zuru oke mma. Ọ bụrụ na i cheburu echiche banyere nke a, n'okpuru ebe a, ị ga-amụta ihe niile banyere oregano, nhazi na nlekọta ya.
Na-eto oregano (oregano): kụrụ na ilekọta osisi ahụ n'ụlọ
Oregano ma ọ bụ oregano bụ osisi osisi herbaceous osisi nke dị elu 60 cm nke dị elu, nke nwere alaka, mkpanaka dị mkpa, ntutu isi na-eto eto na isi. Oval na-eto eto na-eto eto ma na-ebuso ibe ha aka. Obere okooko osisi nke lilac ma ọ bụ na-acha ọcha ọcha ụdị ọta-dị ka fluffy panicles. Ihe omimi nke oregano gụnyere mmanụ dị mkpa, vitamin C na B6, antioxidants na tannins, nke osisi ahụ nwere ihe na-egbuke egbuke ma na-agwọ ọrịa.
Kedu ka esi eto mkpụrụ osisi na-edozi mkpụrụ na ịlekọta n'ụlọ
Ọtụtụ mgbe, ndị na-ahụ ihe na-esi ísì ụtọ na-agbagha mkpụrụ osisi savory na nke thyme. Ikpe ikpe na mgbagwoju anya yiri ụda nke aha herbs. Ma ma savory na thyme ziri ezi ogide ha ebe ke uzommeputa nke culinary ngwa nri. E nwere ihe karịrị okpukpu iri atọ na ụwa. Osisi a ma ama maka odide siri ike nke ose, nke nwere otutu mmanu di mkpa.
Atụmatụ ịgha mkpụrụ pasili maka oyi
Pasili bụ biennial osisi nke Parsley genus sitere na nche anwụ ezinụlọ na ziri ezi branched azuokokoosisi na nke onwunwu, ọchịchịrị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, pinnate epupụta. Nwere acid ascorbic, vitamin B, retinol, riboflavin, ígwè, potassium, magnesium, na pectin bekee na phytoncides. A na-eji ya eme ihe na akọrọ na nke ọhụrụ maka ihe ọkụkụ na nri na nchekwa, a na-agbakwunye ya na efere sitere na akwụkwọ nri, anụ, azụ azụ, na egwuregwu.
Olee otú marjoram si bara uru: uru bara uru na ngwọta ọgwụ nke ahịhịa ahịhịa
Egwuregwu, ude mmanụ, tii, mmanụ - nke ahụ na-abụghị nanị mere si marjoram. A na-eme ka ose dị iche iche n'ụwa nile, ọ na-esikwa ike ịme nri abalị ọ bụla. Ha malitere iji ya mee ọtụtụ narị afọ gara aga. Ọzọkwa, ọtụtụ ngwa dị ka ọ dị, ma na-anọgide na nnukwu. Ruo ugbu a, a na-eji marjoram emeso ọtụtụ ọrịa, ọ na-ahụkwa ngwa ya na cosmetology na n'akụkụ ndị ọzọ.
Njirimara bara uru ma jiri saffron (crocus) mee ihe na nkà mmụta ọgwụ
Ọtụtụ ndị nụla banyere ose saffron, mana ọ bụghị onye ọ bụla nwere ohere ịnwale ya - ọ na-ewute ọnụahịa ndị ahụ. Ọ bụ ihe oriri a nke a na-ewere dị ka nke dị oke ọnụ n'ụwa, nke egosiri ọbụna site na ntinye kwekọrọ na Guinness Book of Records. Akwukwo nke ugwo nke saffron kọwara nke oma na uzu akuko siri ike: o di nkpa ichikota ya na aka ya, ihe ndi ozo site na obere ihe di obere (10 kilo kwa 1 ha).
Ịkụ mkpụrụ ma na-elekọta mmanụ na windowsill, esi esi na-eto eto na-esi ísì ụtọ n'ime ite
Ịgba elu nke ụlọ dị mma ma na-aba uru. I nwere ike itolite mkpuru osisi na window windows. Ọbụna ite dị mfe ma ọ bụ igbe nwere ahịhịa dị ụtọ na windill windows gị ga-abụ mmalite dị mma. Nri, toro na aka aka ya, bụ ihe na-egosi na enweghi ihe ndị na-emerụ ahụ na elu. Kedu esi esi osisi ndị dị na windill windows gị, ị ga-atụlekwa n'isiokwu a.
Na-eto eto arugula na windowsill afọ gburugburu
Ndị Ịtali anaghị anọchite anya nri ha n'enweghị arugula, ọ bụkwa na anyị ka ọ dị n'oge na-adịbeghị anya ma ọ bụ dị oke ọnụ. Taa ị pụrụ ịzụta ya na ụlọ ahịa, ọ na-aghọwanye ewu ewu. E nwere ike ịmalite ịmalite aromatic aromatic arugula maka salad n'enweghị nsogbu na windowsill n'ụlọ.
Ojiji nke arugula: uru na nsogbu
Arugula (Eruka, Indau) pụtara na tebụl anyị n'oge na-adịbeghị anya, mana ọ na-ewe ọnọdụ ya ma na-aghọwanye ndị ọzọ. N'ịchọpụta ihe ndị kachasị mma nke Ịtali na Mediterranean, ọtụtụ ndị anaghị aghọta ihe ndị a na-enweta magburu onwe ya. Banyere arugula n'ozuzu, uru na nsogbu nke iji ya, anyị ga-atụle n'isiokwu a.
Iberibe elu maka oyi: ụzọ kachasị mma
Ọ dịtụghị onye ọ bụla taa na-eche na ọ na-eme nri n'emeghị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. E wezụga eziokwu na ọ bụ nri dị ụtọ ma dị ụtọ maka efere dị iche iche, ọ bụkwa ụlọ nkwakọba ihe nke nri. Ya mere, dị ka ihe atụ, pasili nwere ugboro anọ karịa ascorbic acid karịa lemon. Na 100 g spinach, 25% nke ígwè si na-adị kwa ụbọchị dị mkpa maka onye ahụ.
N'ihe dị elu maka oge oyi: ihe kachasị mma
Inwe ihe nfe bụ ụzọ dị mma isi chekwaa nri n'oge oyi. Ndị nnabata ahụ na-ejizi akwụkwọ nri, mkpụrụ osisi, tomato, herbs, elu. Nke a na-eme ka o nwee ike ịzụrụ ahụ ahụ na vitamin ndị dị mkpa na uru ndị ọzọ bara uru n'oge oyi, mgbe ọ na-esi ike inweta akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi.
Njirimara bara uru na nsogbu cassia (Chinese cinnamon)
Ndi mmadu na-acho apple pie ma obu bun, otutu ndi mmadu na-anuta isi ihe ndi ozo na ... isi nke pawuda. A na-edozi ose a n'etiti ihe ụtọ anyị na-amasị ma na-aghọwanye ndị na-ewu ewu. Ntucha nke a na-amaghị nke ọma bụ nwa nwanne ya bụ Cassia, nke, ma, ọ dị ugbu a, ọ na-ere ahịa ahịa ụlọ, ma ọ bụbeghị ebe doro anya na onye na-azụ ahịa, ya mere enwere nnukwu esemokwu gbara ya gburugburu.
Tea site na lemon balm: ihe bara uru, otu esi na ime biya na ihe ọṅụṅụ, ihe a pụrụ itinye, onye na-enweghị ike
Melissa (mint nke lemon) bụ ama maka ihe ngwọta ya, nke a maara n'oge ochie. Ọ bụrụ na ọ dịtụla mgbe ị kpochara ísì ísì ya, eleghị anya ị gaghị agbaghasị ngwakọta nke mint na lemon na-esi ísì ọ bụla ọzọ. Ụdị melissa kachasị mfe, nke dị mfe, nke na-adịkarị mfe ma ọ bụ nke a na-emekarị.
Cinnamon: ihe bara uru, ihe na enyere aka, ebe ị ga-agbakwunye, otu esi etinye ya n'ọrụ
Ọtụtụ ndị Europe na-ejikọta cinnamon na ihe na-esi ísì ụtọ nke a na-etinye na pastries na salads mkpụrụ osisi na akwukwo nri. Ma n'omume ụwa, ọ bụghị nanị na nke a ka eji iji ngwa nri eme ihe. Na kichin nke mba dị iche iche, a na-agbakwunye ya na anụ, azụ aspic, ngwa ngwa, akpa ọmụmụ, nri nri, dị iche iche pickles, marinades.